फेज नेपालमा जागिर खुल्यो - Sabda Nepal
फेज नेपालमा जागिर खुल्यो
२०७५ मंसिर २, आईतवार १३:५५ गते
नेपालका दूरस्थ क्षेत्रहरूमा गरीब समुदायहरूलाई समर्थन गर्नको लागी विकास व्यवसायीहरूको समूह द्वारा 2006 मा स्थापित गैर सरकारी संस्थाको लागि होइन। पछिल्लो 12 वर्षका लागि, नेपाल, हेमला, बाजुरा, मुगु, गोरखा, काठमाडौं, र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य, शिक्षा, र जीवनशैली सुधार कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। हाल, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवनशैली, DRR र अनुसन्धानमा PHASE नेपाल परियोजनाहरू विभिन्न देशहरूबाट संस्थागत र व्यक्तिगत दाताहरूको संख्याद्वारा वित्त पोषित छन्। PHASE ले विभिन्न परियोजनाहरूमा 140 भन्दा बढि कर्मचारी काम गरिरहेका छन्।
PHASE नेपालले हाल निम्न2पदहरूको लागि उपयुक्त उम्मेदवारहरू खोजिरहेका छन्:
स्थिति: परियोजना प्रबन्धक (कृपया ध्यान दिनुहोस्, यो कार्यालय आधारित स्थिति होइन तर प्रोजेक्ट साइट आधारित स्थिति छैन)
ड्यूटी स्टेशन: कार्यान्वयनका लागी परियोजनाको 70% र PHASE कार्यालय, थिम, भक्तिपुरमा योजना र रिपोर्टिङ (चितवन र धुलाई) को लागि 30%
अवधि:7महिना (एक्सटेन्सनको सम्भावना)
आधारभूत वेतन र लाभ: NRS 64,000 प्रति महिना (आधारभूत प्रारम्भिक वेतन माप) प्लस 10% साक्षात्कार कोष, बेरोजगारी को प्रावधान, पर्वत बोनस प्रोस्टा आधार मा स्वास्थ्य र अस्वास्थ्यगत बीमा लाभ।
योग्यता र अनुभवहरू:
निर्माण प्रबंधन उम्मेद्वार हुनु पर्छ। ग्रामीण विकास या समाजशास्त्र मा मास्टरडिग्री पास, विशेषज्ञता को कम से कम5साल अनुभव हुनुपर्ने । लिखित र बोल्ने अंग्रेजी र नेपाली भाषामा राम्रो हुनुपर्ने
स्वतन्त्र गुणस्तरको प्राविधिक साथसाथै परियोजना गतिविधिहरूको कथा रिपोर्टहरू उत्पादन गर्न सक्षमता हुनुपर्छ।
जिम्मेवार: परियोजना प्रबन्धक कार्यक्रम प्रबन्धकलाई प्रतिवेदन दिइनेछ र सम्बन्धित कार्यधारकहरूसँग योजना, कार्यान्वयन, निगरानी र समन्वय सहित परियोजना गतिविधिहरूको समग्र व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार छ। एस प्रोजेक्ट कर्मचारी पर्यवेक्षक र अक्सर प्रोजेक्ट क्षेत्रहरूमा भ्रमण गर्नुहुनेछ। परियोजना क्षेत्र भ्रमणका लागि डीए र ट्राभल खर्चहरू प्रदान गरिएको छ।
कृपया यदि तपाइँले भरपर्दो योग्यता र अनुभव छैन भने लागू नगर्नुहोस्।
2. स्थिति: क्षेत्र संयोजक
ड्यूटी स्टेशन: इच्छाकुमार ग्रामीण नगरपालिका, चितवन (परियोजना क्षेत्र)
आधारभूत वेतन र लाभहरू: NRS 44 970 प्रति महिना (आधारभूत सुरुवात वेतन परिमाण) 10% प्रवासी निधि, अनावश्यक प्रावधान, प्रवृति आधारमा प्लस आधारमा स्वास्थ्य र आकस्मिक बीमा लाभ।
समान क्षमतामा गैर सरकारी संगठन / ईएनजीहरूमा न्यूनतम3वर्षको अनुभवको साथ कुनै पनि स्ट्रिममा स्नातकको डिग्री। स्थानीय तह योजना, सामुदायिक गतिकरण र परियोजना कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। अंग्रेजी र नेपाली भाषामा लिखित र बोलिएका दुवैको प्रवाह आवश्यक छ। सञ्झ्याल संकुलसँग परिचित हुनुपर्छ।
आवेदन गर्न अन्तिम मिति: नोभेम्बर 30, 2018
कसरी लागू गर्ने?
यदि तपाइँ माथिको पोस्टको लागि आवेदन गर्न चासो राख्नुहुन्छ भने कृपया मानव संसाधन विभागको लागी आवेदन पत्रको साथ आफ्नो सीभ पठाउनुहोस् 30 नोभेम्बर, 2018 सम्ममा phasenepal@yahoo.com लाई।
केवल छोटो सूचीबद्ध उम्मेदवारहरू थप चयन प्रक्रियाको लागि सम्पर्क गरिनेछ। कृपया तपाईंको आवेदन पत्रलाई स्पष्ट तरिकाले विषय रेखामा आवेदन उल्लेख गर्नुहोस्। कुनै टेलिफोन पूछताछहरू मनोरञ्जन गरिनेछ र कुनै अनुचित सिफारिशले स्वचालित रूपमा थप प्रशोधनबाट उम्मेदवारलाई रद्द गर्नेछ। PHASE नेपाल बाल अधिकारको आदर गर्दछ र संगठनको बाल सुरक्षा नीतिलाई कडा रूपमा पछ्याउँछ।
PHASE Nepal एक समान अवसर नियोक्ता हो र सट्टामा योग्यता आधारित चयन पछ्याउँछ। योग्य महिला उम्मेदवारहरू वा हानिकारक समुदायहरूको ती व्यक्तिहरूलाई लागू गर्न प्रोत्साहन गरिन्छ। कुनै पनि मामलामा अनुप्रयोगहरू योग्य / असक्षम गर्न अधिकार सुरक्षित गर्नुहोस्।
प्रकाशित : २०७५ मंसिर २, आईतवार १३:५५ गते
टिकटकका नाटककारहरुको भेला